Indlu yethu yeeNdwendwe ikwindawo ekhuselekileyo, ezolileyo, ecocekileyo, engekude kumbindi. Ngaphakathi ukuhamba umgama shoppinmall iivenkile ezininzi, zokutyela, kunye yokubhaka yokwenyani ekupheleni kwesitrato, ngokufutshane, yonke into enokufikelelwa ukuhlala kamnandi. Sikunika indawo yokuhlala ephangaleleyo nemnandi.
Igumbi lokuhlala eliqaqambileyo elibanzi elinesofa enkulu yekona kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Indlu inamagumbi amane okulala , apho amagumbi okulala ayi 2 acwangciswe kwi airbnb enemoskito net ne fan .
Indawo entle embindini, kufutshane nodederhu lweevenkile lwaseMaretraite, iChoi, ivenkile enkulu, kunye neevenkile ezininzi zamaTshayina / iibhanki ezikumgama wokuhamba. Phakathi kwezitrato ezinkulu zokuthenga eGompert, kunye neWilhelminastraat, ukanti kwindawo ezolileyo enetrafikhi encinci isitalato.
Igumbi lokuhlala , balcony , igadi , mhlawumbi ekhitshini !